भारतीय नम्बर प्लेटको जिपमा माओवादी उम्मेद्धारको पोष्टर ! – YesKathmandu.com
बिहीबार २१, बैशाख २०७४
भन्छन नि नमरी बाँचे दुँनिया देख्न पाइन्छ । माहोल स्थानीय तहको निर्वाचनको छ । बीस वर्ष पछाडि हुन लागेको निर्वाचनमा सर्वसाधरणमा उत्साह छाएको छ तर नेताहरु भने चुनाव जित्ने अस्त्रका रुपमा अनेकन गाइजात्रा देखाउन थालेका छन । स्थानीय तहको चुनावले समेत माओवादी र भारतबीचको कनेक्सनको उजागर गरिदिएको छ ।
एसआर शुन्य ६ पिसि ३१०१ नम्बरको भारतको नम्बर प्लेट भएको जिपमा माओवादी उम्मेद्धारलाई विजयी गराऔं भन्ने व्यानर राखेर कुदाइएको भेटिएको छ ।
एकान्तमा एक घण्टासम्म देउवा निधिबीच के भयो कुराकानी ?
निर्वाचन अगावै तीन गाँउपालिकामा कसरी फहरायो एमालेको झण्डा ?
एमाओवादी नेताले दिए छोरीलाई दाइजो लालपूर्जा
महान्यायाधीबक्ताले किन भेटे मध्यरातमा कामु प्रधानन्यायाधीश ?
कमल थापाले दिँदै राजीनामा, प्रचण्डलाई साथ दिने सांसदको ढाड सेकिने
आजबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रकृया शुरु
कांग्रेस माओवादीले कहाँ कहाँ गरिरहेछन किचकिच ?
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन गृहमन्त्रालय र प्रहरीले टेरेनन्
असईलाइ मकैबारीमा बोलाइ हत्या गरेको आरोपमा युवती पक्राउ
ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराई दोब्बर मतले अगाडि